နောက်ဆုံးမိနစ်အနိုင်ဂိုးကို အငြင်းပယ်ခံခဲ့ရလို့ ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို – Sports A2Z
Analysis • Other Leagues
နောက်ဆုံးမိနစ်အနိုင်ဂိုးကို အငြင်းပယ်ခံခဲ့ရလို့ ဒေါသပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒို
ပြီးခဲ့တဲ့ညက ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ ဆာဘီးယားအသင်းတို့ရဲ့ ယူရိုဖလားခြေစစ်ပွဲမှာ နှစ်ဂိုးစီနဲ့ သရေကျနေခဲ့ပြီး ပွဲချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာတော့ အသင်းခေါင်းဆောင် ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်လ်ဒိုက ပေါ်တူဂီအသင်းအတွက် နောက်ကျအနိုင်ဂိုးကို သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီဂိုးဟာ ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေအရ ဂိုးစည်းကို ကျော်လွန်ပြီး ဂိုးဝင်သွားခဲ့သော်ငြား ကွင်းလယ်ဒိုင်က ဂိုးခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိလို့ ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဒေါသပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပြီး အသင်းခေါင်းဆောင်လက်ပတ်ကိုပါ ချွတ်ပြီး ကွင်းပြင်ပေါ် လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
ပေါ်တူဂီအသင်း အနိုင်ရရှိပြီလို့ ထင်မှတ်ပြီး အောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုဟာ သူ့ရဲ့ဂိုးမဝင်ကြောင်း မှားယွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ စည်းကြပ်ဒိုင်ကို ဒေါသတကြီး စောဒကတက်မိလို့ အဝါကတ်ပါ အပြခံခဲ့ရတဲ့အပြင် ပွဲသိမ်းခရာမှုတ်လို့အပြီးမှာ အသင်းရဲ့အဝတ်လဲခန်းထဲကိုသာ ဒေါသတကြီးနဲ့ တန်းဝင်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
လက်ရှိယူရိုဖလားချန်ပီယံ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ပထမခြေစစ်ပွဲစဉ်မှာ အဇာဘိုင်ဂျန်ကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင်ရထားလို့ ရမှတ် ၃ မှတ်ရရှိထားပြီး အခုပွဲမှာလည်း ဒီယိုဂို ဂျိုတာရဲ့ ပထမပိုင်းဦးဆောင်ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ့အတူ ဆာဘီးယားကို အနိုင်ယူပြီး ရမှတ် ၆ မှတ်စုဆောင်းသွားဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့တာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ အိမ်ရှင်ဆားဘီးယားရဲ့ တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေကနေ မီထရိုဗစ်ချ်နဲ့ ကော့စ်တစ်ချ်တို့ရဲ့ ချေပဂိုးတွေကို လေးလံနေခဲ့တဲ့ ဂျိုဆေး ဖွန်တေနဲ့ ဒါနီလို ပါရဲရားတို့ရဲ့ အမှားတွေကတစ်ဆင့် ခွင့်ပြုပေးခဲ့ရပြီး အနိုင်ကနေ သရေပြန်ဖြစ်သွားခဲ့သလို အမှတ်လျော့ရဖို့ ဦးတည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲရဲ့ အသက်ငွေ့ငွေ့သာ ကျန်တော့တဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်တွေအထိ ပေါ်တူဂီတို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် နောက်ဆုံးမိနစ်မှာ သွင်းယူခဲ့တဲ့ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပြင်းပြတဲ့ အားထုတ်မှုနဲ့ ပွဲသိမ်းအနိုင်ဂိုးဟာ ဂိုးပေါက်ထဲကနေ ဖျက်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး ဂိုးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့ မှားယွင်းစွာ ဆုံးဖြတ်မှုနဲ့အတူ VAR ကို မကြည့်ရှု မစစ်ဆေးဘဲ ငြင်းပယ်ခံသွားခဲ့ရတာပါ။
ဒီနောက်ပိုင်း Goal Line Technology ကိုလည်း အသုံးမပြုခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်အပြီးမှာ ပွဲကို မပြောင်းလဲစေနိုင်တော့တဲ့ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း ဖော်ပြချက်တွေမှာတော့ ရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ကန်သွင်းမှုဟာ ရှင်းလင်းစွာ ဂိုးဝင်သွားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။
When Ronaldo scored for Portugal
What the ref saw Vs what we saw pic.twitter.com/FLmkTxm4J1
— BISOYE 💖 (@Zarah_007) March 27, 2021
ပေါ်တူဂီနည်းပြ ဖာနန်ဒို ဆန်းတို့စ်က ”ဒီလောက်ပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ ဂိုးကို မပေးဘူးဆိုတာ ယုံကြည်နိုင်စရာတောင် မရှိပါဘူး။ ဒီလိုအဆင့်အတန်းမြင့်တဲ့ ပြိုင်ပွဲမျိုးမှာ ဒါကို ဂိုးအဖြစ် မသတ်မှတ်ဘူးဆိုတော့ ပြောပါဦး…. ကျွန်တော်ဘယ်လို ယုံကြည်ရမလဲ။ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါ” လို့ ပွဲအပြီးမှာ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီပွဲရဲ့ ဒိုင်လူကြီး နယ်သာလန်ဒိုင်လူကြီး ဒန်နီ မက်ခီလီကတော့ ပွဲအပြီးမှာ သူ့ရဲ့အမှားအတွက် လာရောက်တောင်းပန်ခဲ့တာကို တလေးတစားနဲ့ လက်ခံကြောင်း ဖာနန်ဒို ဆန်းတို့စ်က ပြောကြားသွားခဲ့ပေမယ့် ဒီလိုမျိုး ဒိုင်တွေရဲ့ အမှားတွေ ကျူးလွန်မှုကို ချေဖျက်ဖို့ ထားရှိခဲ့တဲ့ VAR ကို အသုံးမပြုခဲ့တာအတွက်တော့ ပြိုင်ပွဲ တာဝန်ရှိသူတွေကို မေးခွန်းထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
UEFA က ကြီးမှူးကျင်းပတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားခြေစစ်ပွဲ ဥရောပဇုန်မှာ နည်းပညာအကူအညီမပါဘဲ ကျင်းပနေတာဖြစ်သလို VAR ကို အသုံးမပြုခဲ့တဲ့အပြင် ဂိုးဝင်တာနဲ့ ဒိုင်လူကြီးရဲ့ နာရီကနေ အချက်ပြမယ့် Goal Line Technology လည်း မပါဝင်တာကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ခံနေရပြီး ရော်နယ်လ်ဒိုကတော့ ဒါဟာ ပေါ်တူဂီတစ်နိုင်ငံလုံးကို နာကျင်စေခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်လို့ စွဲချက်တင်သွားကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
ZAWGYI: ၿပီးခဲ့တဲ့ညက ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ေပၚတူဂီအသင္းနဲ႔ ဆာဘီးယားအသင္းတို႔ရဲ႕ ယူ႐ိုဖလားေျခစစ္ပြဲမွာ ႏွစ္ဂိုးစီနဲ႔ သေရက်ေနခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ေနာက္ဆုံးမိနစ္မွာေတာ့ အသင္းေခါင္းေဆာင္ ခရစၥတီယာႏို ေရာ္နယ္လ္ဒိုက ေပၚတူဂီအသင္းအတြက္ ေနာက္က်အႏိုင္ဂိုးကို သြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ ဒီဂိုးဟာ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းေတြအရ ဂိုးစည္းကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ဂိုးဝင္သြားခဲ့ေသာ္ျငား ကြင္းလယ္ဒိုင္က ဂိုးခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိလို႔ ေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ ေဒါသေပါက္ကြဲသြားခဲ့ၿပီး အသင္းေခါင္းေဆာင္လက္ပတ္ကိုပါ ခြၽတ္ၿပီး ကြင္းျပင္ေပၚ လႊင့္ပစ္ခဲ့တဲ့အထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။
ေပၚတူဂီအသင္း အႏိုင္ရရွိၿပီလို႔ ထင္မွတ္ၿပီး ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္လ္ဒိုဟာ သူ႔ရဲ႕ဂိုးမဝင္ေၾကာင္း မွားယြင္းဆုံးျဖတ္ခဲ့တဲ့ စည္းၾကပ္ဒိုင္ကို ေဒါသတႀကီး ေစာဒကတက္မိလို႔ အဝါကတ္ပါ အျပခံခဲ့ရတဲ့အျပင္ ပြဲသိမ္းခရာမႈတ္လို႔အၿပီးမွာ အသင္းရဲ႕အဝတ္လဲခန္းထဲကိုသာ ေဒါသတႀကီးနဲ႔ တန္းဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။
လက္ရွိယူ႐ိုဖလားခ်န္ပီယံ ေပၚတူဂီအသင္းဟာ ပထမေျခစစ္ပြဲစဥ္မွာ အဇာဘိုင္ဂ်န္ကို ၁-၀ နဲ႔ အႏိုင္ရထားလို႔ ရမွတ္ ၃ မွတ္ရရွိထားၿပီး အခုပြဲမွာလည္း ဒီယိုဂို ဂ်ိဳတာရဲ႕ ပထမပိုင္းဦးေဆာင္ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔အတူ ဆာဘီးယားကို အႏိုင္ယူၿပီး ရမွတ္ ၆ မွတ္စုေဆာင္းသြားဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။
ဒါေပမယ့္ ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ အိမ္ရွင္ဆားဘီးယားရဲ႕ တန္ျပန္တိုက္စစ္ေတြကေန မီထ႐ိုဗစ္ခ်္နဲ႔ ေကာ့စ္တစ္ခ်္တို႔ရဲ႕ ေခ်ပဂိုးေတြကို ေလးလံေနခဲ့တဲ့ ဂ်ိဳေဆး ဖြန္ေတနဲ႔ ဒါနီလို ပါရဲရားတို႔ရဲ႕ အမွားေတြကတစ္ဆင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရၿပီး အႏိုင္ကေန သေရျပန္ျဖစ္သြားခဲ့သလို အမွတ္ေလ်ာ့ရဖို႔ ဦးတည္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပြဲရဲ႕ အသက္ေငြ႕ေငြ႕သာ က်န္ေတာ့တဲ့ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္ေတြအထိ ေပၚတူဂီတို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမိနစ္မွာ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့ အားထုတ္မႈနဲ႔ ပြဲသိမ္းအႏိုင္ဂိုးဟာ ဂိုးေပါက္ထဲကေန ဖ်က္ထုတ္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ဂိုးမဝင္ဘူးဆိုတဲ့ မွားယြင္းစြာ ဆုံးျဖတ္မႈနဲ႔အတူ VAR ကို မၾကည့္ရႈ မစစ္ေဆးဘဲ ျငင္းပယ္ခံသြားခဲ့ရတာပါ။
ဒီေနာက္ပိုင္း Goal Line Technology ကိုလည္း အသုံးမျပဳခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔ဖလားေျခစစ္ပြဲစဥ္အၿပီးမွာ ပြဲကို မေျပာင္းလဲေစႏိုင္ေတာ့တဲ့ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္း ေဖာ္ျပခ်က္ေတြမွာေတာ့ ေရာ္နယ္လ္ဒိုရဲ႕ ကန္သြင္းမႈဟာ ရွင္းလင္းစြာ ဂိုးဝင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။
ေပၚတူဂီနည္းျပ ဖာနန္ဒို ဆန္းတို႔စ္က ”ဒီေလာက္ျပတ္သားရွင္းလင္းတဲ့ ဂိုးကို မေပးဘူးဆိုတာ ယုံၾကည္ႏိုင္စရာေတာင္ မရွိပါဘူး။ ဒီလိုအဆင့္အတန္းျမင့္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲမ်ိဳးမွာ ဒါကို ဂိုးအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘူးဆိုေတာ့ ေျပာပါဦး…. ကြၽန္ေတာ္ဘယ္လို ယုံၾကည္ရမလဲ။ လုံးဝမျဖစ္ႏိုင္တဲ့အရာပါ” လို႔ ပြဲအၿပီးမွာ ေျပာဆိုသြားခဲ့ပါတယ္။
ဒီပြဲရဲ႕ ဒိုင္လူႀကီး နယ္သာလန္ဒိုင္လူႀကီး ဒန္နီ မက္ခီလီကေတာ့ ပြဲအၿပီးမွာ သူ႔ရဲ႕အမွားအတြက္ လာေရာက္ေတာင္းပန္ခဲ့တာကို တေလးတစားနဲ႔ လက္ခံေၾကာင္း ဖာနန္ဒို ဆန္းတို႔စ္က ေျပာၾကားသြားခဲ့ေပမယ့္ ဒီလိုမ်ိဳး ဒိုင္ေတြရဲ႕ အမွားေတြ က်ဴးလြန္မႈကို ေခ်ဖ်က္ဖို႔ ထားရွိခဲ့တဲ့ VAR ကို အသုံးမျပဳခဲ့တာအတြက္ေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲ တာဝန္ရွိသူေတြကို ေမးခြန္းထုတ္သြားခဲ့ပါတယ္။
UEFA က ႀကီးမႉးက်င္းပတဲ့ ကမာၻ႔ဖလားေျခစစ္ပြဲ ဥေရာပဇုန္မွာ နည္းပညာအကူအညီမပါဘဲ က်င္းပေနတာျဖစ္သလို VAR ကို အသုံးမျပဳခဲ့တဲ့အျပင္ ဂိုးဝင္တာနဲ႔ ဒိုင္လူႀကီးရဲ႕ နာရီကေန အခ်က္ျပမယ့္ Goal Line Technology လည္း မပါဝင္တာေၾကာင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ခံေနရၿပီး ေရာ္နယ္လ္ဒိုကေတာ့ ဒါဟာ ေပၚတူဂီတစ္ႏိုင္ငံလုံးကို နာက်င္ေစခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္လို႔ စြဲခ်က္တင္သြားေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။